प्रहरीधरहरा | सङ्ख्या २ २०१९
लेखको भाषा अकोली अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आउकान आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इक्वेडरियन साङ्केतिक भाषा इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इबानाग इलोको इसोको ईवी उङ्गान्गेला उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली उन्डुबेली (जिम्बावे) उम्बुन्डु उरुन्ड् उर्दू उर्होबो एफिक एस्टोनियन ओटेटेला ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन करेन (गः) काजाक काबीय काम्बा किकाओन्डे किकुयु किकोंगो किन्यारवान्डा किम्बुन्डु किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा किसोंगे कुइचुआ (इम्बाबुरा) कुइचुआ (सिम्बोराजो) कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) केक्ची कोंगो कोरियन कोरियन साङ्केतिक भाषा कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्युबान साङ्केतिक भाषा क्यूबेक साङ्केतिक भाषा क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (अनक्यास) क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (कुज्को) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी गारीफुना गिटोंगा गुजराती गून ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (जिम्बावे) चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चियाओ चिली साङ्केतिक भाषा चीन (हाका) चुकिज चुभास चेक चोल चोवे जर्जियन जर्मन जर्मन साङ्केतिक भाषा जान्डे जापटेक (इस्मस) जापटेक (लाचिगुइरी) जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जाभानिज जाभान्टे जुलू झेल्तल टगालोग टर्किश टाटार टिकुना टिग्रिन्या टिभ टुभालुअन टेटन डिली टोंगन डच डाँग्मे डिगोर डुआला डेनिश ड्रेहु तामिल तारास्कान ताहिटी तेलगु तोक पिसिन तोजोलबल तोतोनक त्लापनेक त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नाभाहो नाह्वाटल (उत्तरी पुएब्ला) नाह्वाटल (ग्वेरेरो) नाह्वाटल (वास्टेका) नाह्वाटल (सेन्ट्रल) निआस निऊ नेपाली नोंगा न्यानेका पंगासिनन् पंजाबी पापियामेन्टो (अरुबा) पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोनापियन पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश पोलिश साङ्केतिक भाषा फन फिजियन फिनिश फ्रान्सेली बंगाली बाओले बाटाक (कारो) बाटाक (टोबा) बाश्कीर बासा (क्यामरून) बिकोल बियाक बिस्लामा बुल्गेरियन बेलिज क्रिओल बोउलो ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भारतीय साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेनेजुएलन साङ्केतिक भाषा भेन्डा मङ्ग (ह्वाइट) मङ्गोलियन मझतेक (हुआट्ला) मबुन्डा मराठी मरुसियन क्रिओल मले मल्यालम माकुशी मापुडुङ्गुन माम माम्ब्वे-लुंगु माया मार्शलिज मालागासी माल्टिज मिजो मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार म्यासडोनियन यापिज युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रुटोरो रुन्यानकोर रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोङ्गा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुकोन्जो लुगान्डा लुन्डा लुभेल लो जर्मन वलिसियन वायुनाइकी वारे-वारे वेल्श वोलाइटा शिलुबा शोना श्वा सरमक्कन सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सामोअन सिंहला सिडामा सिनयान्जा सिबेम्बा सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल सेसोथो (दक्षिण अफ्रिका) सेसोथो (लेसोथो) सोट्सेल सोलोमन टापु पिजिन स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्वाहिली (कंगो) स्विडिस हंगेरियन हंगेरियन साङ्केतिक भाषा हाइटियन क्रिओल हिन्दी हिब्रू हिरी मोटु हिलिगेनोन हेरेरो हौसा
“अचानक दाइको मृत्यु हुँदा म छाँगाबाट खसेझैँ भएँ। उहाँ बितेको महिनौँ पछि पनि मलाई उहाँको यादले सताइरहन्थ्यो। मलाई भित्र भित्रै छुरा रोपेझैँ हुन्थ्यो। कहिलेकाहीँ मलाई एकदमै रिस उठ्‌थ्यो। दाइ किन मर्नुभयो होला भनेर सोच्ने गर्थेँ। दाइसित समय बिताउन नपाएकोमा मलाई निक्कै पछुतो लागेको छ।” —भेनेसा, अस्ट्रेलिया
मृत्युको कारण आफूले माया गरेको व्यक्‍ति गुमाउनु पर्दा तपाईँ पनि शोकमा पर्नुभयो अनि एक्लो महसुस गर्नुभयो होला। साथै तपाईँलाई रिस पनि उठ्यो होला। दोषी महसुस गर्नुका साथै डर पनि लाग्यो होला। अनि तपाईँलाई आफ्नो जीवनको कुनै अर्थ छैन जस्तो लाग्यो कि?
शोक गर्नु भनेको कमजोरीको चिन्ह होइन। किनभने शोक गर्दा तपाईँ उक्‍त व्यक्‍तिलाई कति धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर देखिन्छ। तर के पीडादायी शोकबाट मुक्‍ति पाउन सम्भव छ?
हामी कसरी सहन सक्छौँ
आफ्नो पीडा कहिल्यै निको नहुने जस्तो देखिए तापनि यी सल्लाहहरू लागू गर्दा तपाईँले सहने बल पाउनुहुनेछ:
आफ्नो पीडा नलुकाउनुहोस्‌
सबैको शोक गर्ने तरिका एउटै हुन्छ भन्‍ने छैन। तर शोकमा पर्दा रोयौँ भने हाम्रो पीडा केही हदसम्म कम हुन्छ। माथि उल्लेख गरिएकी भेनेसा यसो भन्छिन्‌: “म आफ्नो पीडा कम गर्न रुने गर्थेँ।” आफ्नो बहिनी गुमाएकी सोफिया यसो भन्छिन्‌: “विगतको कुरा सम्झनु भनेको घाउ सफा गर्नु जस्तै हो। यसो गर्दा पीडा त हुन्छ, तर घाउ भने बिस्तारै निको हुन्छ।”
आफ्नो भावना अरूलाई पोखाउनुहोस्‌
कहिलेकाहीँ तपाईँलाई एक्लै रहन मन लाग्छ होला। तर शोकको पीडा गह्रौँ भारीजस्तै हो। यसलाई एक्लै बोक्न नखोज्नुहोस्‌। आफ्नो बुबा गुमाएका सत्र वर्षका जारेड यसो भन्छन्‌: “मैले आफ्नो भावना अरूलाई बताएँ। सायद मैले आफ्नो भावना राम्रोसित व्यक्‍त गरिन होला तर यसो गर्दा मेरो मन हल्का भयो।” सुरुको लेखमा उल्लेख गरिएकी जेनिस अझै यसो भन्छिन्‌: “अरूसित कुरा गर्दा मैले निक्कै सान्त्वना पाएँ। उहाँहरू मेरो भावना बुझ्नुहुन्थ्यो। यसले गर्दा मैले एक्लो महसुस गरिनँ।”
अरूको मदत स्विकार्नुहोस्‌
एक जना डाक्टर यसो भन्छन्‌: “शोकमा डुबेकाहरूले सुरुदेखि नै आफ्नो साथीभाइ अनि नातेदारबाट मदत स्विकार्दा तिनीहरूलाई आफ्नो पीडा सहन निक्कै मदत मिल्छ।” तपाईँका साथीहरू तपाईँलाई मदत गर्न चाहिरहेका हुन सक्छन्‌। तर कसरी मदत गर्ने भनेर तिनीहरूलाई थाह नहुन सक्छ। त्यसैले आफूलाई कस्तो मदत चाहिएको छ, उनीहरूलाई बताउनुहोस्‌।—हितोपदेश १७:१७.
परमेश्‍वरसित नजिक हुनुहोस्‌
टिना यसो भन्छिन्‌: “क्यान्सरले गर्दा मेरो श्रीमान्‌को अचानक मृत्यु भयो। त्यसैले म आफ्नो सबै चिन्ता-फिक्री परमेश्‍वरलाई बताउँथेँ। म हरेक बिहान ‘मलाई सहने बल दिनुहोस्‌’ भनेर परमेश्‍वरलाई पुकार्थेँ। परमेश्‍वरले मलाई यत्ति धेरै मदत गर्नुभयो कि म त्यो बयानै गर्न सक्दिनँ।” बाइस वर्षकी छँदा आफ्नी आमा गुमाएकी टार्सा यसो भन्छिन्‌: “दिनहुँ बाइबल पढ्‌दा मैले निकै सान्त्वना पाएँ। यसले मलाई हौसला दियो।”
फेरि जीवित हुने आशाबारे कल्पना गर्नुहोस्‌
टिना अझै यसो भन्छिन्‌: “सुरुमा त मलाई मरेकाहरू फेरि जीवित हुने आशाले केही सान्त्वना दिएन। किनकि मलाई मेरो श्रीमान्‌ र मेरा छोराहरूलाई बुबा चाहिएको थियो। श्रीमान्‌ बितेको अहिले चार वर्ष भइसक्यो। म अहिले यस आशामा मनन गर्ने गर्छु, म उहाँलाई फेरि भेट्‌ने समयको कल्पना गर्छु। यसो गर्दा म आनन्दित हुन्छु।”
तपाईँको पीडा तुरुन्तै कम नहोला। तर भेनेसाको अनुभवबाट एउटा कुरामा भने पक्का हुन सक्छौँ। तिनी भन्छिन्‌: “तपाईँलाई आफ्नो चोट कहिल्यै निको हुँदैन जस्तो लाग्न सक्छ। तर बिस्तारै तपाईँको मनको घाउ पुरिँदै जानेछ।”
तपाईँलाई आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको यादले सताइरहन्छ होला तर तपाईँको जीवन त्यहीँ समाप्त हुँदैन। परमेश्‍वरको मायालु मदत पाएर तपाईँले असल मित्रहरूको न्यानो सङ्‌गतिबाट आनन्द उठाउन सक्नुहुन्छ। अनि उद्देश्‍यपूर्ण जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। चाँडै परमेश्‍वरले मरेकाहरूलाई ब्युँताउनु हुनेछ। तपाईँले फेरि आफूले माया गरेको व्यक्‍तिलाई भेटेको परमेश्‍वर चाहनुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको मनको चोट सदाको लागि निको हुनेछ।
बाइबलमा पाइने मदतकारी सल्लाह
परमेश्‍वरले तपाईँको शोक र आँसु देख्नुहुन्छ।
एक जना बाइबल लेखकले यस्तो लेखे: “मेरो आँसु तपाईँको मशकमा जम्मा गरिदिनुहोस्‌। ती तपाईँको पुस्तकमा लेखिएका छैनन्‌ र?”—भजन ५६:८.
तपाईँ आफ्नो मनको बह परमेश्‍वरलाई पोखाउन सक्नुहुन्छ।
“म आफ्नो मनको पीडा उहाँमा बिसाउँछु; . . . हे यहोवा, * मदतको लागि म तपाईँलाई पुकार्छु।”—भजन १४२:२, ५.
तपाईँसित आशा छ।
“[मरेकाहरू] फेरि जीवित हुनेछन्‌।”—प्रेषित २४:१५.
मरेकाहरूलाई फेरि जीवित पार्नेछु भनेर परमेश्‍वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। उहाँ आफ्नो प्रतिज्ञा पूरा गर्न साँच्चै इच्छुक हुनुहुन्छ। *—अय्युब १४:१४, १५.
^ अनु. 24 यहोवा बाइबलमा उल्लेख गरिएको परमेश्‍वरको नाम हो।
^ अनु. 27 मरेकाहरू फेरि जीवित हुनेछन्‌ भन्‍नेबारे थप जानकारीको लागि यहोवाका साक्षीहरूद्वारा प्रकाशित बाइबलले हामीलाई के सिकाउँछ? किताबको अध्याय ७ हेर्नुहोस्‌। यो किताब www.jw.org/ne बाट निश्‍शुल्क डाउनलोड गर्न सकिन्छ।
फेरि जीवित हुनु भनेको के हो?
को-को फेरि जीवित हुनेछन्‌ भनेर थाह पाउँदा सायद तपाईँलाई अचम्म लाग्ला।
शेयर गर्ने शेयर गर्ने आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको मृत्यु हुँदा
के जिउनुको कुनै अर्थ छ?—आफूले माया गरेको व्यक्‍तिको मृत्यु हुँदा
जब जिउने इच्छा मर्छ
प्राकृतिक प्रकोपको मारमा पर्दा
जीवनसाथीले धोका दिँदा
गम्भीर रोग लाग्दा
जीवनदेखि हरेस खाँदा
जीवन अर्थपूर्ण छ—किन?
‘उहाँले तपाईँको ख्याल राख्नुहुन्छ’
Text प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा के जिउनुको कुनै अर्थ छ?
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्रहरीधरहरा के जिउनुको कुनै अर्थ छ?
के जिउनुको कुनै अर्थ छ?
प्रहरीधरहरा के जिउनुको कुनै अर्थ छ?